Jiro loharano - FL410 / FL411
avy amin'ny admin tamin'ny 21-07-01
Hatramin'ny voalohany, Eurborn dia nifikitra tamin'ny soatoavin'ny "fisokafana sy ny hitsiny, fizarana sy fahazoana, fikatsahana ny hatsarana, famoronana lanja", mifikitra amin'ny filozofia momba ny "fahamendrehana sy fahombiazana, fironana amin'ny varotra, ny fomba tsara indrindra, ny valva tsara indrindra ". Inoanay ...
Jiro ao amin'ny Eurborn - Ataovy tsaratsara kokoa ny fiainanao
Eurborn dia nanaraka hatrany ny fanahin'ny orinasa "Kalitao, Fahombiazana, fanavaozana ary fahamarinana." Eurborn dia manana departemanta bobongolo sy fikarohana ary fampandrosoana. Ny bobongolo rehetra dia vokariny irery, mba hahafahany mamonjy ny famolavolana ny vokatra sy ny ...
Jiro SPOT - Vondron-tokantrano
ML1021, PL021, PL023, ary PL026 dia andiam-pianakaviana malaza iray hafa. Avy amin'ny lahatsoratra dia azonao atao ny mahita ny bika avy amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe kokoa intuitively. Ny herinaratra dia manomboka amin'ny 1W ka hatramin'ny 6W ho an'ny safidinao. Ity vokatra ity dia mivantana, noho izany dia ampiasaina be izy hanazavana ny fifantohana ...
BL100-Safidin'ny jiro yachting anao
Ny fampifangaroana ny kalitao sy ny fitaovana mandroso, ny fitantanana mitandrina, ny vidiny mirary, ny fanohanana tsara ary ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpanjifa, dia nanao fikarohana izahay mba hanomezana ny mpanjifanay ny vokatra fakan-tahaka tsara indrindra. Amin'ny ...
Avelao hitambatra ny tontolo iainana maitso sy miasa
Eurborn dia nanolo-tena tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isaky ny zoro eto amin'ny biraonay, apetraka ny zavamaniry isan-karazany. Ny ampahany misy dikany dia ny zavamaniry rehetra dia nilaozana indray mandeha ary naverin'ny mpitantana anay indray mba hamelana azy ireo hateraka indray ...
Vokatra kintana - GL116 amin'ny jiro amin'ny tany
Fampidirana ireo jiro mafana napetraky ny Fianakaviana mivarotra anay, GL116, GL116C, GL116H, GL116Q, GL116SQ. Haavo, ary misy hery 1W, 1.3W, 3W, 3.5W ho anao hisafidy. Mandritra izany fotoana izany, mba hifanaraka amin'ny tontolon'ny fampiasana samihafa, dia azo fehezin'ny RGB na DM ...
Jiro ambanin'ny tany — Filazana GL112
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-07
Mikasika ny hazavana ambanin'ny tany / anaty rano GL112, azonao atao ny misafidy ny herin'ny 0.5W, 1W na 1.3W ho an'ny hazavana GL112 nalevina. Ny akora ankapobeny amin'ny vokatra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony an-dranomasina 316. Ampiasaina amin'ny vakana jiro CREE nafarana avy any Etazonia ...
Eurborn - Fandoro afo, mitandrema
Raha mifantoka amin'ny famokarana jiro isan-karazany i Eurborn, ao anatin'izany ny hazavana anatiny, ny hazavan'ny rindrina, ny hazavan'ny spike, sns. Noho izany, mba hanatsarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana ny mpiasa, Eurborn dia nikarakara fandoroana afo tamin'ny 20 aprily ho an'ny ...
Loharano azo havaozina karakarain'ny Eurborn
Ny Eurborn dia nametraka lanja lehibe hatrany ny loharanom-pitaovana azo havaozina. Nankamamiay foana ny fanomezana natiora ho an'ny olombelona. Ho an'ny jiro ivelan'ny tany an-kalamanjana ary ny fivoaran'ny jiro LED dia nanolo-tena izahay hanao ny vokatray ...
Laser logo ho an'ny jiro ao anaty
Taloha, ny marika amin'ny vokatra dia nasiana marika tamin'ny kaody jet jet, fa ny fanontana ranomainty dia tsy mora manjavona fotsiny, fa somary mifanakaiky amin'ny tontolo iainana ihany koa. Miteraka entona manimba ...